Otu na -emepụta crane na -ebubata akụkụ na -ere ahịa CCMIE
Akụkụ n'ozuzu: 14100mm X 2500mm X 4100mm
Ọrụ: ụgbọ njem 20ft na 40ft akpa
Nkwusioru: nkwusioru igwe ma ọ bụ nkwusioru ikuku
Taia: 12R22.5, 315/80R22.5, 11.00R20
Trailer ụdị ọdịda gear: JOST ika
Sistemụ breeki na -adọkpụ: WABCO
Sistemụ eletriki: 24V, ọkụ ọkụ LED, 7-pin Socket (maka eriri waya 7)
Ọnụ ọgụgụ dị elu: 37 ton
Side Lift Crane bụ kreenụ pụrụ iche nke na -ebuli arịa site n'otu gwongworo ma ọ bụ ụgbọala na -adọkpụ gaa ebe ọzọ. Ndị mmadụ na-akpọkwa ya dị ka ndị na-ebu ihe n'akụkụ, na-ebuli elu ma ọ bụ na-adọkpụ ụgbọala na-adọkpụ, nke nwere ike inyere anyị aka ịnye ọrụ njikwa akpa dị elu. Ebumnuche anyị bụ idozi njikwa ọrụ na ụlọ ọrụ ụgbọ njem ụwa. Anyị bụ ndị ọkachamara na ụgbọala na -adọkpụ, njikwa akpa na njem, anyị na -echekwa ma na -emepụta ngwaahịa ọhụrụ nke nwere ike ịchekwa oge ndị ọrụ na onye nwe ego otu ndị njem. Anyị na -achọsi ike ịnye ndị ahịa gburugburu ụwa azịza zuru oke. Anyị na -agbalị bst ịnye gị ọmarịcha ọrụ, afọ ojuju na nrụpụta maka gị.
Ụlọ ọrụ anyị "na -erube isi na nkwekọrịta ahụ", nwere ike irube isi n'ọchụchọ ahịa, sonye na asọmpi ahịa dị elu, nye ndị na -azụ ahịa enyemaka zuru oke na nke ka elu, wee hapụ ha ka ha bụrụ ndị mmeri buru ibu. Nchụso ụlọ ọrụ ahụ bụ iji nweta afọ ojuju ndị ahịa 100% na nnukwu akụkụ Lift Crane 20ft ruo 40ft. Anyị na-ekwe nkwa na anyị nwere ike ịnye azịza kacha mma kacha mma na ọsọ ọsọ ma nye ndị ahịa nwere ezigbo enyemaka mgbe ahịa gachara. Anyị ga -arụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta ọmarịcha World of Side Lift Crane.
Akụkụ ebuli kreenụ maka ire ere, anyị kwenyere na site na ọrụ ịdị mma anyị na -agbanwe agbanwe, ị nwere ike nweta anyị arụmọrụ kacha mma na ọnụ ala dị ọnụ ala n'aka anyị ogologo oge. Anyị kpebisiri ike ịnye ọrụ ka mma yana ịmepụta uru karịa ndị ahịa niile. Atụrụ m anya na anyị nwere ike imepụta ọdịnihu ka mma.
Nchekwa gburugburu ebe obibi nke mmezi nke Side Lift Crane
Maka ichedo gburugburu ebe obibi anyị, biko lelee mkpofu sitere na ngwaahịa ahụ nke ọma mgbe ị na -arụ ọrụ na mmezi. Jide n'aka na ị ga -ahazi, chekwaa ma kpofuo ihe mkpofu ahụ mgbe ị na -arụ ọrụ, na -echekwa ma ọ bụ na -arụkwa ngwaahịa a, a na -ahazi bọket maka ịnakọta mkpofu siri ike (akwụkwọ mkpofu, igwe na -emebi emebi) dị ka ihe ụfọdụ chọrọ si dị, otu ruru eru na -eweghachi ihe mkpofu ahụ. .
Ihe egwu dị egwu:
1) Na -eji bọket pụrụ iche achịkọta ụdị mmanụ efu ọ bụla ma kaa akara "mkpofu ihe egwu" na bọket ahụ, gbalịa zere ịwụfu mmiri mgbe ị na -achịkọta ihe.
2) Batrị nchekwa: Chekwaa batrị mkpofu na mpaghara akọwapụtara wee mee akara akara "mkpofu ihe egwu", emesịa ndị otu ruru eru kwesịrị ịnara ha.
Nke gara aga: Onye na -adọkpụ akpa ihe nkiri
Osote: Ebuli akụkụ